Cialis ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုရှောင်ရှားရန် - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
ရပ်ရွာ၊ သတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ပြင်းထန်သောအားကစား ဆီးဂိမ်း ကုမ္ပဏီ, သတင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီသတင်း ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုန်ပစ္စည်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> Cialis ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုရှောင်ရှားရန်
Cialis ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ | သွေးပေါင်ချိန် | ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲ | သတိပေးချက်များ | အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ | ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲ
Cialis (တက်ကြွစွာပါဝင်သည့်အရာ - tadalafil) သည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသသောအမှတ်တံဆိပ်ဆေးညွန်းဆေးဖြစ်သည်။ လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ ကျယ်ပြန့်သောဆီးကျိတ် (ညင်သာပျော့ပျောင်းသောဆီးကြိတ် hyperplasia သို့မဟုတ် BPH) ၏။ tadalafil သည်လိင်တံရှိချောမွေ့သောကြွက်သားများနှင့်သွေးလွှတ်ကြောများကိုဖြေလျှော့ပေးသော phosphodiesterase type5(PDE5) ဟန့်တားသူအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
Cialis သည်ထုထည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက်လိင်တံသို့သွေးများပိုမိုစီးဆင်းစေရန်အချိန်ပိုပေးသည်။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်ရန် Cialis သည်လိင်မှုနှိုးဆွပေးသည်။
Cialis သည်ဆီးကြိတ်ကင်ဆာလက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန်ကူညီပေးသည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းထဲရှိကြွက်သားများကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် BPH အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၊ သွေးကြောများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ဆေးဝါးများသည်မလိုလားအပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောမူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်သည်။ Cialis ကိုစဉ်းစားသောသူများသည်ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆေးဝါးနှင့်မသင့်လျော်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သင့်သည်။
RELATED: Cialis အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ Cialis အထူးလျှော့စျေးရယူပါ
Cialis ၏အသုံးများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ -
ဝမ်းနည်းစိတ်ဆိုး / ဝမ်းလျှော
နှာခေါင်းနှင့် pharynx ရောင်ခြင်း
Cialis သည်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည် -
အချိန်ကြာမြင့်စွာစိုက်ထူ : ရှားရှားပါးပါးဖြစ်သော်လည်းအချို့သောလူများသည် Cialis နှင့်ဆင်တူသောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသောက်သုံးခြင်းတွင် (လေးနာရီထက်ပိုသောကြာမြင့်သောစိုက်ထူခြင်း) သို့မဟုတ် priapism (နာကျင်သောစိုက်ထူမှုသည်ခြောက်နာရီထက်ပိုမိုကြာရှည်ကြောင်း) အစီရင်ခံတင်ပြကြသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာစိုက်ထူခြင်းနှင့် priapism နှစ် ဦး စလုံးအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုချက်ချင်းမကုသပါက၊
ရူပါရုံကိုရုတ်တရက်ဆုံးရှုံးမှု : tadalafil ကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများတွင်သွေးလွှတ်ကြောမဟုတ်သည့် anterior ischemic optic neuropathy သို့မဟုတ် NAION သတင်းများ - ခဲသည်။ NAION သည်ရုတ်တရက်ကျဆင်းခြင်း (သို့) မျက်လုံးတစ်လုံး (သို့) နှစ်ခုလုံးတွင်အမြင်အာရုံလုံးဝပျောက်ဆုံးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရူပါရုံပြောင်းလဲမှုကိုသင်သတိပြုမိပါကဆေးကိုချက်ချင်းရပ်တန့ ်၍ အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူပါ။
ကြားနာခြင်းရုတ်တရက်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်း : အကြားအာရုံဆုံးရှုံးမှုကို Cialis နှင့်ဖော်ပြပြီး၊ မူးဝြေခင်းသို့မဟုတ်နား၌အူခြင်းနှင့်တွဲဖက်နိုင်သည်။ အကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်းကိုသတိပြုမိပါကချက်ချင်းဆေးဝါးကိုရပ်တန့်ပြီးအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူပါ။
နှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်လေဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သောနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ : Cialis သောက်နေစဉ်ပြင်းထန်သောနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်ပွားသောလူအများစု (အားလုံးမဟုတ်) အားလုံးသည်ယခင်ကရှိပြီးသားအန္တရာယ်အချက်များရှိသည်။
သွေးတိုးရောဂါ (သွေးတိုးရောဂါ): Tadalafil သည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချသောကြောင့်သွေးပေါင်ချိန်နိမ့်ခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြင်းထန်သည့်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုများ - Cialis ကြောင့်ရှားပါးသော်လည်းပြင်းထန်သော (နှင့်သေစေလောက်သော) ပြင်းထန်သောခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုများ၌မုံရွာ၊ စတီဗင် - ဂျွန်ဆင်ရောဂါနှင့် exfoliative အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
Cialis သည်သွေးလွှတ်ကြောများမှချောမွေ့သောကြွက်သားများကိုဖြေလျော့ပေးပြီးသွေးပေါင်ချိန်ကိုအနည်းငယ်လျော့စေသည်။ ယင်းကြောင့်သွေးပေါင်ချိန်နိမ့်ခြင်းသို့မဟုတ်သွေးတိုးရောဂါသည်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သွေးတိုးရောဂါကိုကျဆင်းစေသောသွေးပေါင်ချိန်အဖြစ်သတ်မှတ်သည် 90/60 မီလီမီတာပြဒါး (mmHg) အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည် ) ။ အနိမ့်ဆုံးနည်းသောသွေးပေါင်ချိန်သည်လူများကိုစိတ်ပျက်ခြင်း၊ အကယ်၍ သွေးပေါင်ချိန်နိမ့်ကျပါကအရေးကြီးသောအင်္ဂါများသည်ပျက်ယွင်းပြီးသေစေနိုင်သည်။
tadalafil ၏အဆင့် III ကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေမှာ (949 ထဲက) အဘယ်သူမျှမလူနာလက်တွေ့ hypotension ခံစားခဲ့ရသည်။ အဆင့် (၃) တွင်လေ့လာမှုများအရသွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချစေသောဆေးဝါးများနှင့်တွဲ သုံး၍ tadalafil ၏လုံခြုံမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်သွေးပေါင်ချိန်နိမ့်ခြင်းကိုအနည်းငယ်သာတိုးစေသည်။ နှစ်မျိုးသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောသွေးတိုးဆေးများသောက်သုံးပါက tadalafil သည်သွေးတိုးရောဂါ၏ဖြစ်ပွားမှုကိုမတိုးစေနိုင်ပါ။
သွေးပေါင်ချိန်နိမ့်ခြင်း၏နောက်တစ်နည်းမှာ orthostatic hypotension ဖြစ်သည် သွေးပေါင်ချိန်ရုတ်တရက်ကျဆင်းခြင်း လူတစ်ယောက်ထိုင်နေတဲ့နေရာမှာဒါမှမဟုတ်လိမ်နေတဲ့အနေအထားကနေရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါကဖြစ်တတ်တယ်။ မကြာခဏအန္တရာယ်ကင်းနေစဉ်, lightheadedness, orthostatic hypotension ထက်အနည်းငယ်ပိုထုတ်လုပ် လေးနက်သောအကျိုးဆက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် ၎င်း၏အကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်။ ။ ဤပြissueနာကိုအာရုံစိုက်သော (အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်) လေ့လာမှုတွင် tadalafil သည် orthostatic hypotension အပေါ်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုမရှိပါ။
Cialis ၏အသုံးများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာယာယီသာဖြစ်သည်။ ဆေးကိုရပ်ဆိုင်းပြီးနောက်နာရီအနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းပျောက်သွားလိမ့်မည်။ အချို့သောခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခါးနာခြင်းနှင့်ကြွက်သားနာကျင်ခြင်းစသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာ Cialis အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်စေခြင်းဖြစ်သည်။
အကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များဖြစ်သည့်ပြင်းထန်သည့်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုများ၊ ကြာရှည်စိုက်ထူမှုများ၊ အကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်း၊ နှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်လေဖြတ်ခြင်းတို့ကြောင့် Erectile တစ်ရှူးများပျက်စီးခြင်းကဲ့သို့ဆိုးရွားသော်လည်းရှားပါးသောဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဆိုးရွားသောအဖြစ်အပျက်များသည်တစ်သက်တာလုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ NAION လုပ်နိုင်မှုကြောင့်အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးမှု အမြဲတည်နေပါ ။
Cialis contraindications & သတိပေးချက်များ
အထူးသဖြင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့် Cialis သည်လူအားလုံးအတွက်မှန်ကန်သောဆေးမဟုတ်ပါ။ Cialis သည်အမျိုးသားများအတွက်ကန့်ကွက်သည်။
tadalafil မှလူသိများလေးနက် hypersensitivity နှင့်အတူ
ပြင်းထန်သောကျောက်ကပ်ရောဂါ (ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှု) သို့မဟုတ်ကျောက်ကပ်ကျောက်ကပ်ဆေးကြောခြင်းခံရသောအမျိုးသားများနှင့်အတူ
ပြင်းထန်အသည်းရောဂါနှင့်အတူ (Hepatic ချို့ယွင်း)
အဘယ်သူသည်နိုက်ထရိတ်သို့မဟုတ် guanylate cyclase stimulators ယူပါ
အချို့လူများသည် Cialis ကိုသောက်သုံးနိုင်သော်လည်းသတိထားရန်လိုအပ်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများ၊ သတိထားစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည့်ဆေးပမာဏလျှော့ချခြင်းတို့ရှိနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားပါဝင်သည်:
သွေးလွှတ်ကြောမဟုတ်သည့် anterior ischemic neuropathy (NAION) သို့မဟုတ် optic disk crowding ကဲ့သို့သောအန္တရာယ်အချက်များသမိုင်း။
ထိုကဲ့သို့သော Peyronie ရဲ့ရောဂါ, cavernosal fibrosis, ဒါမှမဟုတ် angulation အဖြစ် penile ပုံပျက်သော
တံစဉ်ဆဲလ်သွေးအားနည်းရောဂါ၊ သွေးကင်ဆာ (သို့) myeloma မျိုးစုံကဲ့သို့သော priapism ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောမည်သည့်အခြေအနေမဆို
အရ မင်းကွန်း ယခုခေတ်တွင် amyocardian infarction, angina, hypotension, stroke (သို့) ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောပုံမမှန်ခြင်းများ (သို့) မကြာသေးမီကကဲ့သို့သောနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအခြေအနေများရှိသောလူနာများသည် Cialis ကိုမသောက်သင့်ပါ၊
Cialis နှင့်အခြား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆေးဝါးများ (EDMs) ကိုအပန်းဖြေရန်အတွက်အသုံးပြုသည် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်မား အထူးသဖြင့်လိင်တက်ကြွသောလူငယ်များကြားတွင်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအပြင် EDM ဆေးများကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သည့်အမျိုးသားများသည်လူနေမှုပုံစံစသည့်ရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ၊
tadalafil ကဲ့သို့သောဆေးများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုမှု၊ သဘောတူညီမှုအမြင်သူတို့မကျင့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ EDM မှီခိုမှုကိုဆက်စပ်သောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရွေးချယ်မှုများနှင့်ခွဲခြားရန်အထူးသဖြင့်ခက်ခဲသည်။ EDMs ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သောအမျိုးသားများသည်လည်း erectile dysfunction ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပန်းဖြေဆေးများကိုအသုံးပြုပြီး EDM များကိုနာတာရှည်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ မြင့်မားသောတက်ကြွသောလိင်ဆက်ဆံမှုပုံစံသည် EDM များကိုနာတာရှည်သို့မဟုတ်အလွန်အကျွံသုံးရန်လိုအပ်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုမှုသို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာခြင်းကိုမဖြစ်စေသော Cialis ကဲ့သို့ဆေးဝါးများသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည် အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အပြုအမူမှီခို ။ စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များသည်ဤအခြေအနေကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာရောဂါဟုသတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုသည်ဆက်ဆံရေးနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမည်မျှရှိသည်ကို မူတည်၍ ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်သည်ဟုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြသည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်အပန်းဖြေမှုအသုံးပြုခြင်း (သို့) tadalafil ကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုပြdisနာကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ အလွဲသုံးစားမှုကိုအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်ရန်ကုထုံးလိုအပ်သည်။
Cialis သည်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ငယ်ရွယ်သူများအားဘယ်သောအခါမျှပေးမည်မဟုတ်ပါ။
အမျိုးသမီးများအတွက် Cialis ကိုခွင့်မပြုပါ။
ထုတ်လုပ်သူသည်အသက်အရွယ်အပေါ် မူတည်၍ သောက်သုံးသောချိန်ညှိခြင်းကိုမထောက်ခံပါ။ သို့သော် Cialis ၏သင့်လျော်သောသောက်သုံးသောအပေါ်ဆုံးဖြတ်သောအခါအသက်အရွယ်နှင့်အခြားအခြေအနေများအပြည့်အဝကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
Cialis interaction က
cialis သည်အစားအစာနှင့်မစားပဲရနိုင်သည်။ သို့သော်, ဒီ Cialis နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည်ကိုမဆိုလိုပါ အားလုံး အစားအစာများ။ ကျွဲကောသီးတွင် tadalafil ၏ခန္ဓာကိုယ်၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုနှေးကွေးစေသောအရာများရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကမူးယစ်ဆေးဝါးကိုဖြိုခွဲဖို့အချိန်ယူရတယ်။ ဒါကြောင့်သွေးထဲမှာ tadalafil ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကတက်လာပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုပိုဖြစ်စေတယ်။
tadalafil သောက်သောအမျိုးသားများသည်လည်းအရက်ကိုမသောက်သင့်ပါ။ Cialis လိုပဲအရက်ကသွေးပေါင်ချိန်ကိုကျစေတယ်။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည် Cialis နှင့်သွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းစေနိုင်သည်။ FDA က Cialis သောက်သည့်အခါတစ်နေ့လျှင်လေးကြိမ်ထက်မပိုရန်အကြံပြုသော်လည်းသင်၏အခြားအခြေအနေများနှင့် / သို့မဟုတ်သင်သောက်သည့်ဆေးဝါးများအပေါ် မူတည်၍ အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုသူနှင့်စစ်ဆေးပါ။
Cialis တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိသည်။ ဆေးသောက်ချိန်၌ယောက်ျားများသတိထားသင့်သည်။
နိုက်ထရိတ် - နှိုင်းယှဉ်ထားသည် - နိုက်ထရိတ်သည်ရင်ဘတ်နာကျင်မှု (Angina) ကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသောဆေးများဖြစ်သည်။ သူတို့က Cialis နှင့်အလွန်ဆင်တူသည့်နည်းလမ်းဖြင့်ပြုမူသည်။ ၎င်းတို့သည်သွေးလွှတ်ကြောကြွက်သားများကိုအနားယူစေသည့်မော်လီကျူး (cyclic guanosine monophosphate) ၏အဆင့်ကိုတိုးပွားစေသည်။ သွေးကြောများသည်လျင်မြန်စွာကျယ်လာပြီးသွေးစီးဆင်းမှုကိုနှလုံးသို့တိုးစေသည်။ နိုက်ထရိတ်ပါဝင်သည် nitroglycerin , nitroprusside, isosorbide mononitrate နှင့် isosorbide dinitrate ။ နိုက်ထရိတ်ကို Cialis နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုအလွန်အမင်းလျှော့ချနိုင်သဖြင့်နှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်လေဖြတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ နိုက်ထရိတ်ကိုအမြဲတမ်းလိုအပ်မည်ဆိုပါက Cialis ဆေးနောက်ဆုံးသောက်ပြီးနောက် ၄၈ နာရီမတိုင်မှီအသုံးပြုနိုင်သည်။
Guanylate cyclase (GC) ကိုလှုံ့ဆော်သူများ - ဆန့်ကျင်သည် - GC လှုံ့ဆော်သူတွေကို Cialis ကိုဘယ်တော့မှမပေးပါဘူး အသက်ရှူလမ်းကြောင်း (riociguat) သို့မဟုတ် Verquvo (vericiguat) ။ Adempas သည်အဆုတ်သွေးလွှတ်ကြောကို (နှလုံးမှအဆုတ်သို့သွားသောသွေးလွှတ်ကြောများတွင်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်း) ကိုကုသသည်။ Verquvo သည်နာတာရှည်နှလုံးရောဂါရှိသောလူနာများတွင်အသုံးပြုသည်။ GC လှုံ့ဆော်သူများသည်သွေးလွှတ်ကြောများကိုကျယ်စေသည့်ဓာတုပစ္စည်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် Cialis နှင့်နိုက်ထရိတ်ကဲ့သို့တူညီသောနည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုကြောင့်သွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းစေနိုင်သည်။
နိုက်ထရိုက် နိုက်ထရိုက်များသည်နိုက်ထရိတ်နှင့်ဆင်တူသည်။ သူတို့ကသွေးလွှတ်ကြောထဲမှာချောမွေ့တဲ့ကြွက်သားတွေကိုဖြေလျှော့ပေးတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကို tadalafil နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်ရင်သွေးပေါင်ချိန်ကျစေနိုင်တယ်။ နိုက်ထရိုက်များကို amyl nitrite သို့မဟုတ် butyl nitrite အပါအဝင် poppers ဟုခေါ်သောအပန်းဖြေဆေးများတွင်တွေ့နိုင်သည်။
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆေးဝါးများ (EDMs): အကယ်၍ Cialis သည် Cialis ကဲ့သို့ PDE5 inhibitors ဖြစ်သောအခြား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆေးဝါးများနှင့်အတူအသုံးပြုပါကအဆုပ်နှင့်အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာပိုမိုအန္တရာယ်များသည်။ ပါဝင်သည်သောဤမူးယစ်ဆေးဝါးများ Viagra (sildenafil) နှင့် Levitra (vardenafil) ကို Cialis သောက်သည့်အခါရှောင်သင့်သည်။
သွေးတိုးဆေးဝါးများ (သွေးတိုး) Cialis သည်သွေးပေါင်ချိန်နိမ့်သည့်ဆေးများနှင့်ပေါင်းစပ်။ သွေးပေါင်ချိန်နိမ့်မှုနည်းသည်။ ထို့ကြောင့်ကုထုံးများသည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံဆေးများကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ opioids, anti-depressants နှင့် antipsychotic ဆေးများကဲ့သို့သောအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်လည်းသွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်ပြီး Cialis နှင့် တွဲဖက်၍ သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာရန်လိုအပ်သည်။
Alpha-blockers: Alpha-blockers များသည်မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်သို့မဟုတ်ဆီးကြိတ်ကြီးခြင်းကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ သွေးပေါင်ချိန်နိမ့်ခြင်းကြောင့် Cialis ကိုဤဆေးများနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်မထောက်ခံပါ။
CYP3A4 inhibitors: Grapfruit အပြင်ဆေးများစွာသည် tadalafil ကိုဖြိုခွဲသော CYP3A4 ခေါ်အင်ဇိုင်းတစ်ခုအားပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့် tadalafil ၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုလည်းနှေးကွေးစေပါသည်။ ဤဆေးများတွင်ပantibိဇီဝဆေးအမျိုးအစားအချို့၊ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီဆေးအမျိုးအစားများ၊ အချို့သောဖန်းဂတ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးအမျိုးအစားများပါ ၀ င်သည်။ ketoconazole နှင့် itraconazole), အချို့သော benzodiazepines အမျိုးအစားများနှင့်အချို့သော corticosteroids ။ tadalafil ကိုအားကြီးသော CYP3A4 inhibitor နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ Cialis ၏အနိမ့်ဆေးထိုးလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
CYP3A4 သွေးဆောင်မှု: တနည်းအားဖြင့်အချို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများသည် Cialis ဆေး၏အကျိုးကျေးဇူးကိုလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့် tadalafil ၏ခန္ဓာကိုယ်၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုမြန်စေသည်။ CYP3A4 သွေးဆောင်မှုကိုခေါ်သောဤမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ကြီးလေးသောပြproblemsနာများမဖြစ်ပေါ်စေပါ။ CYP3A4 သွေးဆောင်မှုဥပမာများတွင် rifampin, phenobarbital, phenytoin နှင့် carbamazepine တို့ပါဝင်သည်။ အဆိုးဆုံးမှာ Cialis ဆေးကိုတိုးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများနှင့်ဆေးဝါးပညာရှင်များသည်ဤဆေးများကိုကောင်းစွာတတ်မြောက်ထားကြသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ပေါင်းစပ်မှုကိုအလွယ်တကူတွေ့ရှိနိုင်ပြီးအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်သည်။
1. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတစ် ဦး ၏စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင် Cialis ကိုယူပါ
လိုင်စင်ရကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူထံမှဆေးညွှန်းမပါဘဲ Cialis သို့မဟုတ်အခြား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆေးဝါးများမသောက်ပါနှင့်။ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ရှားရန်ဆရာ ၀ န်ကသတ်မှတ်ထားသည့်ကိုယ်ခန္ဓာစစ်ဆေးမှုနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်သင့်သည်။ အချို့သောအခြေအနေများရှိသူများအတွက်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ရှားရန်ပုံမှန်ဆေးကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
၂။ Cialis ကိုလိုင်စင်ရဆေးဆိုင်မှသာဝယ်ပါ
Cialis သို့မဟုတ်အခြား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆေးဝါးများကိုအခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့် ၀ ယ်ယူခြင်းသည်အတုသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ကင်းသောဆေးဝါးများ ၀ ယ်ယူခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆေး၏အားသာချက်များသည်မှားနိုင်ပြီးထိရောက်မှုမရှိခြင်းသို့မဟုတ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Cialis ကိုဆေးညွှန်းဖြင့်သာဝယ်ယူပါ၊ သင်၏ဒေသခံဆေးဆိုင်သို့မဟုတ်သင့်အာမခံ၏စာတိုက်အော်ပရေတာစသည့်လိုင်စင်ရဆေးဆိုင်များမှဝယ်ယူပါ။
3. ညွှန်ကြားအဖြစ် Cialis ယူပါ
သတ်မှတ်ထားသောဆေးကိုသောက်ပါ။ ဆေးဝါးလမ်းညွှန်သို့မဟုတ်ဆေးနှင့်အတူပါသည့်လူနာ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်၊ နားလည်၊ လိုက်နာပါ။ ဆေးဝါးဆရာဝန်၊ ဆရာဝန်သို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုမဆိုဖြေကြားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်၏ဆရာ ၀ န်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းမပြုဘဲဆေးပမာဏမတိုးပါနှင့်။ အကယ်၍ ထိရောက်မှုသို့မဟုတ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပြaနာဖြစ်လျှင်သင်၏ဆေးကုသမှုခံယူသူအားဆေးထိုးချိန်ညှိခြင်းနှင့်ပြောဆိုပါ။
သွေးဆဲလ်ပြproblemsနာများ (ဥပမာ - တံစဉ်ဆဲလ်သွေးအားနည်းရောဂါ)
မျက်စိပြproblemsနာများ (ဥပမာ - retinitis pigmentosa သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောအမြင်အာရုံဆုံးရှုံးမှု)
အချိန်ကြာမြင့်စွာ (>4နာရီ) စိုက်ထူ၏သမိုင်း
၅။ တစ်ရက်လျှင် Cialis ထက် ပို၍ မသောက်ပါနှင့်
Cialis တွင်တက်ကြွစွာပါဝင်သော Tadalafil သည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ကြာရှည်စွာတည်ရှိသည်။ လိုအပ်သည့်အတိုင်း Cialis ကိုသောက်သောအခါ၊ (လိင်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမတိုင်မီအနည်းဆုံးမိနစ် ၃၀ တွင်) သောက်သောဆေးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို ၃၆ နာရီအထိခွင့်ပြုသည်။ Cialis ကိုနေ့စဉ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသောအခါတစ်နေ့လျှင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်သောက်ပါ။
cialis သည်အစားအစာနှင့်မစားပဲရနိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်သည်ခန္ဓာကိုယ်မှ tadalafil ကိုဖယ်ရှားရန်ခန္ဓာကိုယ်၏စွမ်းရည်ကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သည့်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သောဂရိုင်းသီးဖြစ်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန် Cialis ကိုသောက်သုံးသောအခါ၊ စပျစ်သီးသို့မဟုတ်အသီးဖျော်ရည်ကိုမသောက်ပါနှင့်။
Cialis သည်သွေးပေါင်ချိန်ကျသည်။ အရက်လည်းအလားတူပါပဲ။ အသင့်အတင့်သောက်သုံးနိုင်သောပမာဏသည်အဆင်ပြေသော်လည်း FDA သည် Cialis သောက်သည့်အခါအချိုရည်လေးခုဘေးကင်းစွာသတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ၅ အောင်စစပျစ်ဝိုင်လေးခွက်သို့မဟုတ်အရက်လေးချောင်းကိုဆိုလိုသည်။ သင်၌အခြားအခြေအနေများရှိခြင်းသို့မဟုတ်အရက်နှင့်ထိတွေ့နိုင်သောအခြားဆေးဝါးများသောက်သုံးခြင်းကြောင့်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအားအရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Cialis သည်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကိုမကာကွယ်နိုင်ပါ။ ကွန်ဒုံးနှင့် spermicide ကဲ့သို့သောသင့်လျော်သောကာကွယ်မှုကိုသုံးပါ။ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကိုဆေးကုသမှုခံယူပါ။
သတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ် Cialis ဆေးပညာအမေရိကန်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အဆုတ်သွေးတိုးရောဂါကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသော phosphodiesterase-5 inhibitors နှင့်ဆေးဝါးဆက်ဆံမှုများ၊ ဖြန့်ဝေ
သွေးတိုးရောဂါ , StatPearls
အရိုးအထူးကု Hypotension , StatPearls
Orthostatic hypotension: ယန္တရားများ၊ အကြောင်းတရားများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု , လက်တွေ့အာရုံကြောဂျာနယ်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဘွဲ့ကြိုအမျိုးသားများအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆေးဝါးများအားအပန်းဖြေခြင်း၊ လက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များ , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်
Viagra အသုံးပြုခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုအမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ် , ကူးစက်ရောဂါ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်
လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်ဆေးများနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောမက်သာဖီတမင်း၏ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု (MARATHON) သည်မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်ရန် , စွဲနှင့်ကျန်းမာရေး
nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy ၏ကုသမှု , မျက်လုံးပညာရပ်ဆိုင်ရာစစ်တမ်း
PDE5 တားစီး ,StatPearls
သမာဓိ , Plumb ရဲ့ကုသရေးဆေးဝါးလမ်းညွှန်များ
Tadalafil ဝင်းအကျဉ်းချုပ် ,ဆေးပညာ၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားစာကြည့်တိုက်
Briana Aguirre: သင်သိရန်လိုသောအချက် ၅ ချက်
cv များ၌အာမခံမပါဘဲ adderall သည်မည်မျှကုန်ကျသနည်း
sudafed နှင့် pseudoephedrine သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်